‘शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारप्रति गम्भीर छौं’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारप्रति गम्भीर छौं’
‘शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारप्रति गम्भीर छौं’
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार March 13, 2019	0 64 Views
घोराही। नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारप्रति स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। सेवाप्रदायक निकाय र सेवाग्राहीबीच स्थानीय तहस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जनप्रतिनिधिहरुले नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनमा आफूहरु गम्भीर ढंगले लागेको बताए।
सो अवसरमा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका–७ का अध्यक्ष खोपीराम चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारको कार्यान्वयन गर्न वडा कार्यालयले सोही अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाले प्रसूति भवन निर्माणको काम लामो समयदेखि चलिरहेको भए पनि कार्यसम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वडा कार्यालयले भवन निर्माणकै लागि रकम विनियोजन गरेको बताउनुभयो। पुराना हिसाव किताव स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या आएको भन्दै उहा“ले गत वर्ष विनियोजन भएको दुई लाख रकम फ्रिज भएर गएको बताउनुभयो। उहा“ले हाल सञ्चालन भएको प्रसूति सेवालाई सुविधासम्पन्न गराउन भवन निर्माणलाई तीब्रता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कृषकहरुका लागि माटो परीक्षणलगायतका कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आवश्यकताका आधारमा कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का सदस्य केशवराज विसीले साना कक्षाका विद्यार्थीहरुले कक्षा छोड्ने समस्या देखिएको भन्दै निरन्तर कक्षामा सहभागी गराउन सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहा“ले वडाकै कार्यक्रमअनुसार भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको तर बीचमा विद्यालय छोड्नेक्रम बढेकाले स्थानीय तह, सरोकारवाला सबैको पहलले मात्रै ड्रपआउट रोक्न सकिने बताउनुभयो। उहा“ले कृषकहरुले माटो परीक्षण गरे शिविर सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै सबै सरोकारवालास‘“ग समन्वयको आवश्यकता आंैल्याउनुभयो। मावि जजरागाउ“को जमिन विद्यालयकै नाममा दर्ता गरिनुपर्ने, वडा नं. ६ र ७ मा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो।
मानवअधिकार निगरानी समूह सांैडियारका उपाध्यक्ष लौटन चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जे.एन.सागरले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ र ७ का जनप्रतिनिधि, मावि जजरागाउ“, जयशेर मावि रावतगाउ“का संरक्षण शिक्षक, पत्रकार र स्थानीयको सहभागिता थियो।
Previous: ट्रान्सफर्मर हटाउन माग
Next: निराश भए खेतीपाती गर्नेहरु
चट्याङ लाग्दा नौजना गम्भीर घाइते
छात्रमा दीपज्योति र छात्रामा जनज्योतिलाई उपाधि
उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान